Vao nivoaka ny fonja tsy ela dia sarona indray…: mpifoka rongony sady mpanendaka gagilahy… | NewsMada
Sprinter nitondra mpianakavy, tapaka “frein”: roa maty tsy tra-drano, 13 hafa naratra mafy
New York: Andry Rajoelina rencontre Antonio Guterres
Vao nivoaka ny fonja tsy ela dia sarona indray…: mpifoka rongony sady mpanendaka gagilahy…
Par Taratra sur 20/07/2021
Tsy vitan’ny hoe efa mpamerin-keloka, satria vao nivoaka ny fonja tsy ela akory, fa mbola mpidoroka sy mpifoka rongony koa, alohan’ny hanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Tratra ihany izy efa-dahy ireto, rehefa nataon’ny polisy hazalambo teny 67 ha.
Manohy hatrany ny hetsika efa nataon’izy ireo ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahafito (CSP7) 67 ha hamongorana ireo mpanao asa ratsy ao amin’ny fari-piadidian’izy ireo. Araka ny fanazavan’ny polisy, misy andian-jiolahy manendaka eny amin’ny lalana Boulevard de l’Europe Ankasina, Madinox, lavage Ankasina. Tsy mifidy ora izy ireo fa na maraina na antoandro na hariva, manomboka amin’ny 6 ora ka hatramin’ny 9 ora alina ny fanatanterahan’ireo jiolahy ny asa ratsiny. Taorian’ny fikarohana nataon’ny polisy, fantatra ny anaran’ireto jiolahy ireto sy ny toerana misy azy ireo eny amin’iny faritra 67 ha iny ihany. Ny 17 jolay 2021 tokony ho tamin’ny 6 ora maraina, nidina nisambotra azy ireo teny amin’ny faritra Ankasina 67 ha ny polisy. Jiolahy iray tratra voalohany ka niainga avy amin’ny fahatrarana ity jiolahy ity ny nahafahana nisambotra ireo namany mipetraka eny amin’ny manodidina ihany. Ny fanadihadian’ny polisy hatrany no nahafantarana fa mialoha ny hanaovan’izy ireo ny asa ratsiny, mifoka rongony ry zalahy.
Saika hangalatra lamba teo an-davarangana…
Efa jiolahy mpamerin-keloka ny roa ary vao nivoaka ny fonja noho ny raharaha fanendahana hatrany. Ny iray amin’ireto jiolahy ireto, tratra teo am-pikasana hangalatra lamba teo an-davarangana tamina tranon’olona iray eny 67 ha. Nambaran’ny polisy fa roa lahy no niditra tao amin’ity tokantranon’olona ity ka nitsambikina niditra tao an-trano ka nihevitra haka ireo lamba miahy. Tsikaritr’izy ireo anefa fa nisy olona hivoaka tao amin’ilay trano ka niafina tao amin’ny trano fidiovana izy raha tafaporitsaka kosa ny namany. Hitan’ny tompon-trano anefa izy niafina tao an-trano ka niantso polisy avy hatrany izy ireo ary niafara tamin’ny fisamborana azy izany. Natolotra ny fampanoavana omaly ihany ireto jiolahy ireto ka naiditra am-ponja vonjimaika.
Ilafy: un compteur explose et provoque un incendie 22/09/2021
Accident sur la RN4: deux membres d’une famille tués, 12 autres blessés 22/09/2021
Beloha Androy: arrestation de six braconniers 22/09/2021
Ecstasy, cocaïne, héroïne…La consommation de drogue dure prend de l’ampleur 22/09/2021
Santé oculaire: un centre de formation à la chirurgie de la cataracte à Ilafy 22/09/2021